Dutchtown နှင့်စိန့်လူးဝစ္စ၏တောင်ဘက်ခြမ်းအတွက် DutchtownSTL.org အတွက်အရာရှိများရွေးကောက်တင်မြှောက်ခြင်း
Dutchtown ကိုမြို့၊ ပြည်နယ်နှင့်ဖက်ဒရယ်အဆင့်တွင်ရွေးကောက်တင်မြှောက်ခံရသည့်တာ ၀ န်ရှိသူအမျိုးမျိုးကတာဝန်ယူသည်။ သင်၏ aldermen၊ ပြည်နယ်ကိုယ်စားလှယ်များနှင့်အခြားအရာများအတွက်အရေးကြီးသောဆက်သွယ်ရန်အချက်အလက်များကိုကျွန်ုပ်တို့စုဆောင်းပြီးဖြစ်သည်။
ထိုကဲ့သို့သောပထဝီအနေအထားအရကြီးမားသောရပ်ကွက်တစ်ခုအနေဖြင့်ခရိုင်နယ်နိမိတ်များသည် Dutchtown ကို ဖြတ်၍ မည်သည့်လမ်းကိုဖြတ်သန်းသည်ဖြစ်စေ၊ ရရှိနိုင်ပါကသင်၏ရွေးကောက်တင်မြှောက်ခံကိုယ်စားလှယ်နှင့်သင်ဆက်သွယ်နေကြောင်းအတည်ပြုနိုင်စေရန်မြေပုံများနှင့်လိပ်စာတည်နေရာများသို့လင့်များပါ ၀ င်သည်။
Aldermen ဘုတ်အဖွဲ့သည်စိန့်လူးဝစ္စ၏ဥပဒေပြုအဖွဲ့ဖြစ်သည်။ မြို့ကိုရပ်ကွက် ၂၈ ခုခွဲပြီးတစ်ခုစီကို alderperson တစ်ယောက်မှကိုယ်စားပြုသည်။ ဤသည်မှာ alderperson တစ်ခုချင်းစီမှကိုယ်စားပြုသောလူ ၁၀,၀၀၀ ခန့်ကိုအကျိုးပြုသည်။ အကြမ်းအားဖြင့် ၃၀,၀၀၀ ခန့်သည် Greater Dutchtown ရပ်ကွက်တွင်နေထိုင်သူများနှင့်အတူကျွန်ုပ်တို့သည်မတူညီသောအရာရှိများမှကိုယ်စားပြုခြင်းမှာအံ့အားသင့်စရာမဟုတ်ပါ။
သင်၏ Alderman ဆက်သွယ်ရန်အကြောင်းမှတ်ချက်
ကျွန်ုပ်တို့အားဒေသခံများနှင့်စီးပွားရေးပိုင်ရှင်များအဖြစ်အမှုဆောင်ရန်ကျွန်ုပ်တို့၏ aldermen ကိုရွေးချယ်သော်လည်းတစ်ခါတစ်ရံသင်၏ရပ်ကွက်အတွင်းရှိပြissuesနာများကိုအကူအညီတောင်းရန်ပိုကောင်းသောလမ်းကြောင်းများရှိသည်။ The နိုင်ငံသားများဝန်ဆောင်မှုဗျူရို နှင့်သင့် အိမ်နီးချင်းတိုးတက်မှုအထူးကု နှစ် ဦး စလုံးပြresolveနာများကိုဖြေရှင်းကူညီရန်မြို့ဌာနများနှင့်တိုက်ရိုက်အလုပ်လုပ်ကြသည်။ သင်ပြyou'reနာများရှိနေသေးပါကဝင်ရောက်စွက်ဖက်ရန်သင်၏ alderman ကိုဆက်သွယ်နိုင်သည်။
သင့်အားကူညီရန်ကျွန်ုပ်တို့တွင်ကျယ်ပြန့်သောလမ်းညွှန်များရှိသည် CSB ကိုဆက်သွယ်ပါ နှင့် သင်၏ NIS နှင့်အလုပ်လုပ်ပါ ဒီမှာ DutchtownSTL.org မှာ။
Greater Dutchtown ရပ်ကွက်သည်ရပ်ကွက် (၅) ခု၏တရားစီရင်ပိုင်ခွင့်အတွင်းတွင်ရှိသည်။ သင်မည်သည့်နေရာသို့ရောက်သည်ကိုမသေချာလျှင် သင့်လိပ်စာကိုကြည့်ပါ စိန့်လူးဝစ်၏စီးတီးက်ဘ်ဆိုက်ပေါ်တွင်။
အဆိုပါ ၂၅ ရပ်ကွက် စိန့်လူးဝစ္စမြို့သည်နယ်သာလန်၏အနောက်ပိုင်း၊ အလယ်ပိုင်းနှင့်တောင်ပိုင်းဒေသများ၌ထင်ရှားသောဒတ်ခ်ျတောင်းမြို့ကိုဖုံးလွှမ်းထားသည်။ ဗာဂျီးနီးယားနှင့် Meramec ပတ်လည်ရှိ Downtown Dutchtown areaရိယာသည် ၂၅ ရပ်ကွက်တွင်တည်ရှိသည်။
Ald ။ ရှိန် Cohn၂၅ ရပ်ကွက်
Ald ။ ရှိန် Cohn သူသည်စိန့်လူးဝစ်သမိုင်းတွင်ပထမဆုံးလိင်တူချစ်သူအဖြစ်ရွေးကောက်တင်မြှောက်ခံရသည့် ၂၀၀၉ ခုနှစ်မှစ၍ ၂၅ ရပ်ကွက်ကိုကိုယ်စားပြုသည်။ Ald ။ Cohn ကကုလားထိုင်များ သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးကော်မတီ နှင့်ပေါ်မှာထိုင် အိမ်ရာ၊ မြို့ပြဖွံ့ဖြိုးရေးနှင့်ဇုန်ခွဲခြားသတ်မှတ်ရေးကော်မတီ အဖြစ် ပြည်သူ့ဝန်ထမ်းများ နှင့် ဝန်ထမ်းများနှင့်အုပ်ချုပ်ရေး ကော်မတီများ။ သူသည် ၂၀၂၁ ခုနှစ်တွင် ၄ င်း၏စတုတ္ထမြောက်သက်တမ်းအဝင်တွင်သူသည်ဘုတ်အဖွဲ့၏အဆင့်မြင့်ရာထူးအဖွဲ့ဝင်တစ် ဦး ဖြစ်လာသည်။
Ald ကိုသင်ရောက်နိုင်တယ်။ City Hall တွင် Cohn ၏ရုံးကိုခေါ်ဆိုခြင်းဖြင့် (314) 622-3287။ သူ့မြို့ရဲ့အီးမေးလိပ်စာက cohns@stlouis-mo.gov.
စိန့်လူးဝစ် ၂၅ ရပ်ကွက် ထို့အပြင် Dutchtown ၏ကျယ်ပြန့်သောအဘို့ကိုဖုံးလွှမ်း။ Meramec လမ်းမြောက်ဘက်ရှိ Dutchtown အများစုသည် ၂၀ ရာရပ်ကွက်အတွင်းတွင်ကျရောက်သည်။ ဂရက်ဗွိုက်ဥယျာဉ်အားလုံး (ဂျက်ဖာဆန်အနောက်ဘက်ခြာရိုကီလမ်းတောင်ဘက်ခြမ်းအပါအ ၀ င်)၊ အဏ္ဏဝါဗီလာ၏သိသိသာသာအတုံးနှင့် Pleasant တောင်တန်းတစ်လျောက်တွင်ရှိသည်။
Ald ။ Cara Spencer၂၅ ရပ်ကွက်
20th ရပ်ကွက်ကကိုယ်စားပြုသည် Ald ။ Cara Spencer။ Ald ။ Spencer ကို ၂၀၁၅ တွင်ရွေးကောက်တင်မြှောက်ခြင်းခံရပြီး ၂၀၁၉ ခုနှစ်တွင်ပြန်လည်ရွေးကောက်တင်မြှောက်ခြင်းခံရသည်။ သူမသည် Aldermen's ဘုတ်အဖွဲ့တွင်ဥက္ကch္ဌဖြစ်သည် အစိုးရမဟုတ်သောရေးရာကော်မတီ နှင့်ပေါ်မှာထိုင် ပြည်သူ့ဝန်ထမ်းများ, ပြည်သူ့အန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေးနှင့် နည်းလမ်းများနှင့်နည်းလမ်းများ ကော်မတီများ။
Ald ။ Spencer ကိုတယ်လီဖုန်းဖြင့်ဆက်သွယ်နိုင်သည် (314) 622-3287 ဒါမှမဟုတ်အီးမေးလ်ပို့ခြင်းအားဖြင့် spencerc@stlouis-mo.gov.
Ald ။ Dan Guenther၂၅ ရပ်ကွက်
အဆိုပါ ၂၅ ရပ်ကွက် စိန့်လူးဝစ္စမြို့၏ထူးခြားသောပုံသဏ္wာန်ရှိသောရပ်ကွက်များထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်။ Soulard ရပ်ကွက်မှမြောက်ဘက်အထိ၊ Greater Dutchtown ရပ်ကွက်အထိလမ်းတစ်လျှောက်လုံးကွေးနေ၏။ Marine Villa နှင့် Pleasant တောင်တန်းအများစုကို ၉ ရပ်ကွက်ပိုင်နက်တွင်ထည့်သွင်းထားပြီး ၉ ခုတွင်လည်းခြာရိုကီလမ်းရှည်လျားသောလမ်းများပါ ၀ င်သည်။
Ald ။ Dan Guenther သည် ၂၀၁၇ ခုနှစ်တွင်ရွေးကောက်တင်မြှောက်ခံရပြီး ၉၂ ရပ်ကွက်တွင်စတင်တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ပြီး ၂၀၂၁ တွင်ပြန်လည်ရွေးကောက်တင်မြှောက်ခြင်းခံရသည်။ Aldermen's ဘုတ်အဖွဲ့တွင်ဥက္ကch္ဌအဖြစ်တာဝန်ယူသည်။ ကွန်ဗင်းရှင်းနှင့်ခရီးသွားလာရေးကော်မတီ အဖြစ်အပေါ်အမှုတော်ကိုထမ်းဆောင် စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများ, ဆုံးဖြတ်ချက်များနှင့်အထောက်အထားများ, ကနျြးမာရေးနှင့်လူ့န်ဆောင်မှုများနှင့် အိမ်နီးချင်းဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု ကော်မတီများ။ သငျသညျ Ald ဆက်သွယ်နိုင်ပါသည်။ Guenther at (314) 622-3287 or guentherd@stlouis-mo.gov.
11th နှင့် 13 ရပ်ကွက်
Ald ။ စာရာမာတင်၂၅ ရပ်ကွက်
Ald ။ အန်း Schweitzer၂၅ ရပ်ကွက်
မြို့ရဲ့ ၂၅ ရပ်ကွက် နှင့် ၂၅ ရပ်ကွက် Greater Dutchtown ရပ်ကွက်၏တောင်ဘက်စွန်းရှိမြေကွက်အနည်းငယ်ကိုဖုံးလွှမ်းထားသည်။ ၁၃ ခုမြောက်သည်စိန့်မေရီအထက်တန်းကျောင်းအနီးနှင့်စိန့်စီစီလီယာသမိုင်းဝင်ခရိုင်၏တောင်ဘက်ပိုင်းနှစ်ထပ်တွင်တည်ရှိပြီးရပ်ကွက်အများစုသည်အနောက်ဘက်သို့တိုး။ ဘီဗိုနှင့်ပရင်စတွန်အမြင့်များကိုအခြားရပ်ကွက်များကြားတွင်တည်ရှိသည်။ ၁၁ ခုမြောက်တွင် Pleasant တောင်၏တောင်ဘက်စွန်းတွင်ပါ ၀ င်သော်လည်း Carondelet, Patch နှင့် Holly Hills ရပ်ကွက်များအကျုံးဝင်သည်။
11th ရပ်ကွက်အားဖြင့်တာဝန်ထမ်းဆောင်နေသည် Ald ။ စာရာမာတင်။ Ald ။ ၂၀၁၇ ခုနှစ်တွင်ပထမဆုံးအကြိမ်အဖြစ်မာတင်သည်အနိုင်ရရှိခဲ့သည်။ သူမ၏ရုံးဖုန်းနံပါတ်ဖြစ်သည် (314) 622-3287 နှင့်သူမ၏အီးမေးလ်လိပ်စာဖြစ်ပါတယ် martins@stlouis-mo.gov.
Ald ။ အန်း Schweitzer ၂၀၂၁ ခုနှစ်ရွေးကောက်ပွဲတွင်အနိုင်ရရှိပြီးကတည်းက ၁၃ ရပ်ကွက်တွင်အမှုဆောင်သည်။ သူမတွင်ရောက်ရှိနိုင်သည် (314) 622-3287 or schweitzera@stlouis-mo.gov.
အဆိုပါ Aldermen သမ္မတဘုတ်အဖွဲ့ is Lewis ကရိဒ်ဘုတ်အဖွဲ့ဥက္ကsince္ဌသည်ဘုတ်အဖွဲ့ကိုဥက္ကover္ဌအဖြစ်တာဝန်ယူပြီးအဖွဲ့ဝင်သုံး ဦး အနက်မှတစ် ဦး ဖြစ်သည် ခန့်မှန်းခြေနှင့်ခွဲဝေမှုဘုတ်အဖွဲ့, အခြားသူများကိုမြို့တော်ဝန်နှင့် comptroller ဖြစ်ခြင်း။ E&A ဘုတ်အဖွဲ့သည်မြို့၏နှစ်စဉ်ဘတ်ဂျက်နှင့်အသုံးစရိတ်များအတွက်နောက်ဆုံးတွင်တာ ၀ န်ရှိသည်။
သမ္မတရိဒ်၏ရုံးကိုအီးမေးလ်ဖြင့်ဆက်သွယ်နိုင်ပါသည် reedl@stlouis-mo.gov သို့မဟုတ်ခေါ်ဆိုခြင်းဖြင့် (314) 622-4114.
ဟုတ်ပါတယ်, အထင်ရှားဆုံးမြို့ရွေးကောက်တင်မြှောက်အရာရှိတ ဦး ကဖြစ်ပါတယ် ပိုမိုမြင့်မား. မြို့တော်ဝန် Tishaura O. ဂျုံးစ် နှစ်ပေါင်းများစွာကြိုတင်မြို့တော်ဘဏ္treာရေးမှူးအဖြစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်ပြီးနောက် ၂၀၂၁ ခုနှစ်stateပြီလတွင်ရွေးကောက်တင်မြှောက်ခြင်းခံရသည်။
မြို့တော်ဝန် Tishaura O. ဂျုံးစ်
မြို့တော်ဝန်ဂျုံးစ်သည်အသင်း ၀ င်သုံး ဦး တွင်ထိုင်သည် ခန့်မှန်းခြေနှင့်ခွဲဝေမှုဘုတ်အဖွဲ့ ထိုမြို့ရဲ့ဘတ်ဂျက်နှင့်သင့်လျော်သောအတည်ပြုချက်များအတွက်တာဝန်ရှိသည်။ မြို့တော်ဝန်သည်မြို့အစိုးရ၏ဌာနဆိုင်ရာအကြီးအကဲများကိုပြည်သူ့လုံခြုံရေး၊ လမ်းများ၊ ပန်းခြံများ၊ ကျန်းမာရေးနှင့်လူသား ၀ န်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းများတွင်အဓိကအခန်းကဏ္ dec မှပါ ၀ င်သည်။
မြို့တော်ဝန်ရုံးကိုတယ်လီဖုန်းမှတဆင့်ဆက်သွယ်နိုင်သည် (314) 622-3201။ သင်လုပ်နိုင်သည် ဒီမှာမြို့တော်ဝန်ရုံးကိုဆက်သွယ်ပါ.
မြို့ရဲ့ ကွမ်းခြံကုန်း St. Louis ၏ဘဏ္Fisာရေးအရာရှိချုပ်ဖြစ်သည်။ Controller Darlene အစိမ်းရောင် ၁၉၉၇ ခုနှစ်ကတည်းကတာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ပြီးမကြာမီရာစုနှစ်၏လေးပုံတစ်ပုံရည်မှန်းချက်ကိုရောက်ရှိတော့မည်ဖြစ်သည်။
ကြွေးမြီများ၊ ထောက်ပံ့ငွေများနှင့်လုပ်ခလစာများအပါအ ၀ င်မြို့၏ဘဏ္ancesာရေးကိုစီမံခန့်ခွဲသူရုံးကစီမံသည်။ ရုံးသည်စာရင်းစစ်ခြင်းနှင့်ဘဏ္reportingာရေးအစီရင်ခံခြင်းများအတွက်လည်းတာ ၀ န်ရှိသည်။ အဆိုပါ Controller သည်အဖွဲ့ဝင်သုံး ဦး အနက်နောက်ထပ်ဖြစ်သည် ခန့်မှန်းခြေနှင့်ခွဲဝေမှုဘုတ်အဖွဲ့မြို့တော်အတွက်အဓိကဘဏ္decisionsာရေးဆုံးဖြတ်ချက်များချမှတ်ခြင်း။
အဆိုပါ အခွန်ကောက်ခံ၏ရုံး အိမ်ခြံမြေအခွန်များ၊ ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာအခွန်များနှင့် ၀ င်ငွေခွန်များကိုကောက်ခံသည်။ သက်တမ်းကြာမြို့ပြနိုင်ငံရေးသမား ဂရက်ဂိုရီ FX Daly 2006 ကတည်းကရာထူးဖြည့်ခဲ့သည်။
အဆိုပါ လိုင်စင်ကောက်ခံရေးရုံး လုပ်ငန်းလိုင်စင်ထုတ်ပေးသည်။ လုပ်ငန်းမှအခွန်နှင့်အခွန်များကိုလည်းကောက်ခံသည်။ Mavis Thompson က ၂၀၁၄ တွင်ရာထူးအတွက်ရွေးကောက်တင်မြှောက်ခြင်းခံရသည်။
အဆိုပါ လုပ်ရပ်များ၏မှတ်တမ်း၏ရုံး မွေးစာရင်းနှင့်သေတမ်းစာ၊ လက်ထပ်ခွင့်လိုင်စင်နှင့်သမိုင်းဆိုင်ရာစာရွက်စာတမ်းများစသည့်မြေယာမှတ်တမ်းများအပါအ ၀ င်မြို့ပြမှတ်တမ်းများကိုထိန်းသိမ်းသူဖြစ်သည်။ လက်ရှိလုပ်ရပ်များမှတ်တမ်း မိုက်ကယ်ဘတ္, 2018 ခုနှစ်တွင်ရွေးကောက်တင်မြှောက်။
Aldermen ၏ဘုတ်အဖွဲ့နည်းတူ၊ သာ၍ ကြီးမားသော Dutchtown ရပ်ကွက်သည်ပြည်နယ်အိမ်ခရိုင်များစွာတွင်ပျံ့နှံ့သွားသည်။ ပြည်နယ်တစ်ဝှမ်းတွင်ကိုယ်စားလှယ် ၁၆၃ ဦး ခန့်သည်နေထိုင်သူ ၃၇၀၀၀ ခန့်ကိုကိုယ်စားပြုပြီးကျွန်ုပ်တို့၏သိပ်သည်းသောမြို့ရှိခရိုင်များသည်ကျစ်လစ်သိပ်သည်းသည်။ တစ်ဒါဇင်နီးပါးခရိုင်စိန့်လူးဝစ်၏ဝေမျှဖုံးလွှမ်းကြ၏။
သင်၏ခရိုင်၏မြေပုံများကိုသင်ရှာဖွေနိုင်သည် မစ်ဆူရီအုပ်ချုပ်ရေးရုံးဝက်ဘ်ဆိုက်သို့မဟုတ်သင်၏ပြည်နယ်ကိုယ်စားလှယ်ကိုရှာပါ စီးတီး၏လိပ်စာရှာဖွေရေးကွန်ရက်.
ကိုယ်စားလှယ်။ Rasheen Aldridge78th ခရိုင်
၇၈ ကြိမ်မြောက်မစ်ဆူရီခရိုင်သည်စိန့်လူးဝစ္စမြစ်အနောက်ဘက်ခြမ်းမှ Downtown နှင့်တောင်ဘက် Dutchtown သို့စီးဆင်းသည်။ Dutchland အရှေ့မြောက်ဘက်၊ Gravois ပန်းခြံအများစုနှင့် Marine Villa ၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုသည်ခရိုင်အတွင်းတွင်ရှိသည်။
ကိုယ်စားလှယ်။ Rasheen Aldridge ၂၀၁၉ ခုနှစ်တွင်အထူးရွေးကောက်ပွဲတွင်အနိုင်ရရှိပြီး ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်တွင်အပြည့်အ ၀ ရွေးကောက်တင်မြှောက်ခံရပြီးနောက် ၇၈ ခုမြောက်ခရိုင်ကိုကိုယ်စားပြုသည်။ သူ့ကိုအီးမေးလ်ပို့နိုင်သည် Rasheen.Aldridge@house.mo.gov သို့မဟုတ်မှာဂျက်ဖာဆန်စီးတီးရှိသူ၏ရုံးခန်းခေါ်ပါ (573) 751-2383.
ကိုယ်စားလှယ်စတိဗ် Butz81st ခရိုင်
၈၁ ကြိမ်မြောက်ခရိုင်တွင် Dutchtown သင့်လျော်သော၊ Marine Villa၊ Pleasant Mount နှင့် Gravois Park ၏တံတားများပါ ၀ င်သည်။ စိန့်လူးဝစ္စ၏အရှေ့တောင်ပိုင်းရှိ Holly Hills၊ Bevo နှင့် Carondelet တို့၏အရေးပါသောနေရာများကိုလည်းခရိုင်တွင်တွေ့ရသည်။
၈၁ ကြိမ်မြောက်ခရိုင်ကိုယ်စားလှယ်သည် ကိုယ်စားလှယ်စတိဗ် Butz, အစပိုင်းတွင် 2018. အတွက်ရွေးကောက်တင်မြှောက်မှာသူ၏ရုံးခန်းဆက်သွယ်ပါ (573) 751-0438 သို့မဟုတ်သူ့ကိုအီးမေးလ်ပို့ပါ Steve.Butz@house.mo.gov.
rep ။ ပတေရုသ Meredith80th ခရိုင်
ဂရန်း၏အနောက်ဘက်ဒတ်ခ်ျတောင်းတောင်ပိုင်းနှင့် Meramec ၏မြောက်ဘက်တွင်အနည်းငယ်မျှသာအကျုံး ၀ င်သောခရိုင် ၈၀ သည်အများအားဖြင့် Tower Grove တောင်၊ Shaw နှင့် Southwest Garden ပတ် ၀ န်းကျင်ကိုအဓိကထားသည်။
rep ။ ပတေရုသ Meredith ၂၀၁၆ ခုနှစ်တွင်ရွေးကောက်တင်မြှောက်ခံရပြီးကတည်းက ၈၀ ခုမြောက်ခရိုင်ကိုကိုယ်စားပြုသည်။ သူ၏ရုံးသို့ဆက်သွယ်ပါ (573) 751-6736 or Peter.Merideth@house.mo.gov.
အိမ်ခရိုင်များနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါကပြည်နယ်အထက်လွှတ်တော်ခရိုင်များသည်ပထဝီအနေအထားအရများစွာကြီးမားသည်။ စိန့်လူးဝစ္စစီးတီးကိုအထက်လွှတ်တော်အမတ်ခရိုင်နှစ်ခုသာလွှမ်းခြုံထားသည်။ နယ်သာလန်ကြီးများအားလုံးသည် ၅ ခုမြောက်ခရိုင်တွင်ပါ ၀ င်သည်။
ပဉ္စမမစ်ဆူရီအထက်လွှတ်တော်ခရိုင်သည်စိန့်လူးဝစ္စ၏အရှေ့ဘက်သုံးပုံနှစ်ပုံတွင် Dutchtown၊ Gravois Park၊ Pleasant Mount နှင့် Marine Villa တို့ပါဝင်သည်။ အဆိုပါခရိုင်သည်မြို့၏မြောက်ဘက်ခြမ်းရှိ Baden ရပ်ကွက်မှသည်တောင်ဘက်ပိုင်းအထိတည်ရှိသည်။
အထက်လွှတ်တော်အမတ်စတီဗင်ရောဘတ်၂၀၂၀ တွင်ရွေးကောက်တင်မြှောက်ခံရသူသည်ဂျက်ဖာဆန်စီးတီးရှိ 2020th District ကိုကိုယ်စားပြုသည်။ သငျသညျမှာသူ့ရုံးခန်းဆက်သွယ်နိုင်ပါသည် (573) 751-4415 ဒါမှမဟုတ် အွန်လိုင်းအဆက်အသွယ်ပုံစံ.
မစ်ဆူရီပြည်နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူး အစိုးရအုပ်ချုပ်ရေးမှူးက Mike Parson ဖြစ်ပါတယ်။ ယခင်ဒုဗိုလ်ချုပ်ကြီးအုပ်ချုပ်ရေးမှူးသည် ၂၀၁၈ ခုနှစ်တွင်ယခင်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးရာထူးမှနုတ်ထွက်ပြီးနောက် ၂၀၂၀ တွင်ရွေးကောက်တင်မြှောက်ခြင်းခံရသည်။ ထို့နောက်အုပ်ချုပ်ရေးရုံးသို့ဆက်သွယ်နိုင်ပါသည်။ (573) 751-3222 ဒါမှမဟုတ် အွန်လိုင်းအဆက်အသွယ်ပုံစံ.
အဆိုပါ မစ်ဆူရီအတွက်ရှေ့နေချုပ် အဲရစ်ရှမစ်ဖြစ်သည်။ ရှေ့နေချုပ်သည်အရပ်ဘက်ဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များကိုလည်းကိုင်တွယ်သည် စားသုံးသူကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးအဖြစ်ပြည်နယ်အဆင့်မှာအဖြစ်ပြစ်မှုဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များ။ မှာဂျက်ဖာဆန်စီးတီးရုံးကိုဆက်သွယ်ပါ (573) 751-3321, ဒါမှမဟုတ်သူတို့ရဲ့ဒေသခံစိန့်လူးဝစ်ရုံးမှာ (314) 340-6816။ အီလက်ထရောနစ်ဆက်သွယ်ရေးအတွက်၊ ရှေ့နေချုပ်၏ဆက်သွယ်ရန်စာမျက်နှာ.
အတွင်းရေးမှူး ဂျေး Ashcroft ဖြစ်ပါတယ် မစ်ဆူရီပြည်နယ်အတွင်းရေးမှူး။ ၀ န်ကြီးဌာန၏ရုံးသည်ရွေးကောက်ပွဲများ၊ စီးပွားရေး ၀ န်ဆောင်မှုများနှင့်မှတ်တမ်းများထိန်းသိမ်းခြင်းဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များစွာကိုကိုင်တွယ်သည်။ မှာပြည်နယ်၏အတွင်းရေးမှူးကိုဆက်သွယ်ပါ (573) 751-4936 or info@sos.mo.gov။ ဌာနနှင့်သက်ဆိုင်သည့်အဆက်အသွယ်အမြောက်အများကိုရရှိနိုင်ပါသည် SoS ဝက်ဘ်ဆိုက်.
Mike Kehoe ပါ
1st ခရိုင်ကိုယ်စားလှယ်။ Cori ဘုရှ်
ကိုယ်စားလှယ် Cori Bush1st ကွန်ဂရက်ခရိုင်
ကိုယ်စားလှယ် Cori Bush ၂၀၂၀ ခုနှစ်တွင်မစ်ဆူရီ၏ပထမဆုံးကွန်ဂရက်ခရိုင်ကိုကိုယ်စားပြုရန်တာ ၀ န်ယူထားသူတစ် ဦး အနေဖြင့်စိတ်အနှောက်အယှက်ဖြစ်စေသည့်အောင်ပွဲတွင်ရွေးချယ်တင်မြှောက်ခြင်းခံရသည်။
သမ္မတဘုရ်ှသည် Washington DC နှင့် St. Louis တို့တွင်ရုံးများရှိသည်။ ဒေသရုံးကိုသင်ရောက်နိုင်တယ် (314) 367-1970 သို့မဟုတ်မှာဝါရှင်တန်ရုံးကိုခေါ်ပါ (202) 225-2406။ သင်တို့သည်လည်းလုပ်နိုင် သမ္မတဘုရှ်၏ရုံးကိုဆက်သွယ်ပါ သူမ၏ဝက်ဘ်ဆိုက်မှတဆင့်
အထက်လွှတ်တော်အမတ်များသည်၎င်းတို့၏ပြည်နယ်တစ်ခုလုံးကိုကိုယ်စားပြုရန်ရွေးချယ်တင်မြှောက်ခြင်းခံရသည်။ မစ်ဆူရီမှာဆီနိတ်တာနှစ်ယောက်ရှိတယ်။ အထက်လွှတ်တော်အမတ်ရွိုင်းတုံး နှင့် အထက်လွှတ်တော်အမတ် Josh Hawley.
အထက်လွှတ်တော်အမတ်ဘလပ်၏စိန့်လူးဝစ္စရုံးကိုဆက်သွယ်နိုင်သည် (314) 725-4484။ ၀ ါရှင်တန်ဒီစီရုံးကိုဆက်သွယ်နိုင်သည် (202) 224-5721။ အတော်များများလည်းရှိပါတယ် ဆက်သွယ်ရန်ရွေးချယ်စရာများ အထက်လွှတ်တော်အမတ်ရဲ့ဝက်ဘ်ဆိုက်ပေါ်မှာ။
အထက်လွှတ်တော်အမတ် Hawley အားသူ၏ဒေသရုံးမှတစ်ဆင့်ဆက်သွယ်နိုင်သည် (314) 354-7060 ဒါမှမဟုတ်ဝါရှင်တန်မှာ (202) 224-6154။ အထက်လွှတ်တော်အမတ် Hawley ၏ရုံးခန်းမှသူနှင့်လည်းဆက်သွယ်နိုင်သည် က်ဘ်ဆိုက်.
သမ္မတဂျိုးဇက်ဘိုင်ဒင်ကို ၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ ၂၀ ရက်နေ့တွင်ဖွင့်လှစ်ခဲ့သည် (202) 456-1111, သို့မဟုတ်သင်မှာ switchboard ကိုရောက်ရှိနိုင်ပါတယ် (202) 456-1414။ အိမ်ဖြူတော်တွင်လည်းတစ်ခုရှိသည် အွန်လိုင်းအဆက်အသွယ်ပုံစံ.
ဒီစာမျက်နှာကိုမျှဝေပါ Facebook က, တွစ်တာဒါမှမဟုတ် အီးမေးလ်လိပ်စာ။ ဤစာမျက်နှာကိုနောက်ဆုံးပေါ်မွမ်းမံခဲ့သည် ဇူလိုင်လ 13th, 2021 .
ဒိန်းမတ် Dutchtown အိမ်နီးချင်းအရင်းအမြစ်များ Dutchtown အတွက်အရာရှိများရွေးကောက်တင်မြှောက်